ny tsipika lozika reducers 130mm flange, inline helika hafainganam-pandeha reducer boaty, inline helikoptera, boaty maotera mandeha maotera, reducers làlan-tsofina kely, fanamboarana milina fanindroana, boaty inline
R series redired gear helical dia manana ny mampiavaka azy ny habeny kely, ny lanjany mavesatra, ny fahaizany mitondra ambony, ny fahombiazany, ny androm-piainany lava, ny fametrahana azy tsara, ny elanelam-pahefana maotera ary ny fanasokajiana tsara ny tahan'ny fampitana. Afaka ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana ilaina izany. mihalevona amin'ny indostria isan-karazany. Ny fampiharana avo Torque avo lenta dia mamaritra ny motera matevina Inline Helical ary ny reduc inline dia omena tokana, avo roa heny ary fihenan'ny dia.
Lehibe herinaratra: 0.12-200KW
Isan-karazany ny famindrana: 1.3-33000
Toriteny famandrihana (Kn.m): ambony amin'ny 50
Vokatry ny vokatra: Varitron Helical Gear Motor Reducers Drive dia manasongadina endrika feno. Fahombiazana avo lenta, fitaovam-piadiana helika, tsipika, motera, ac, Mount Mount.
(1) Reducer mpanamboatra herinaratra mitovy amin'ny SEW
(2) Ny fihenan'ny milina fanamafisam-pahefana ambany dia misy ny dingana telo sy ny dingana tokana
Ny heriny: midina 0.3w, 0.12kw 0.18kw 0.25kw 0.37kw 0.55kw 0.75kw 1.1kw 1.5kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 15kw XNUMkwto
Herin'ny soavaly: 0.2hp 0.25hp 0.35hp 0.5hp 0.75hp 1hp 1.5hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp 7.5hp 10hp 12hp 15hp 20hp 25hp 30hp 350hp XNUMXhp XNUMXhp XNUMXhp
Volontsaina: 3v 6v 12v 24v 48v 90v 110v 115v 120v 200v 220v 230v 380v 400v 415v 660v sns.
1. R series helikoptera reducer fananganana fanaingoana manokana, famoronana compact, kely kokoa noho ny X na B series cycloidal gearmotor amin'ny torsiara mitovy.
2. Ny fantsom-bava be sy ny feo malefaka, miaraka amin'ny fahitana famindrana avo.
3. Ireo vokatra dia nampiasaina tamin'ny masinina simika, milina simenitra agitator, fanaovana pirinty ary milina fanosotra, milina sy milina fanaterana herinaratra, metallurgy sns.
Ny vy vy mahery vaika HT250
42CrMo vy vy
Temp. mitsangana (MAX)
NSK, SKF na Marika China Top
Famantarana ny tombo-kase menaka
CFW, NAK na marika hafa
Ny andiany ririotika fanamoriana helika, izay miaraka amin'ireo fepetra ara-teknika iraisam-pirenena, dia manana votoaty teknolojia avo lenta, mamonjy habaka, azo itokisana ary maharitra, miaraka amin-kery ny herinaratra b, hery hatramin'ny 132Kw, fanjifana angovo kely, fampisehoana lehibe kokoa, fahombiazana mihena hatramin'ny 95% etsy ambony. mangovitra ambany, feo malefaka, famokarana angovo mahery vaika, akora vita amin'ny vy vita amin'ny vy, vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy, vovo-tany aorian'ny fanginana sy famonoana, milina fametahana, miantoka ny fifandanjana atsy sy fametrahana miorina, famolavolana fitaovam-piadiana fanodinana ny milina fanonganana, miaraka amin'ny rehetra karazana motera mifangaro amin'ny fampifangaroana elektromisika, manome antoka tanteraka ny kalitaon'ny vokatra.
Ity andian-tsolika miendrika motifika matevina miendrika mavesatra ity dia azo alaina amin'ny fampihenana rihana tokana, avo roa heny, ary triple. Ny karazana MODEL Input Flanges miaraka amin'ny mpivady Solika Input Solika miaraka amin'ny Motro LHF LVF MHF MVF RXHF LHD LVD MHD. Manome alàlan'ny fihenam-bidy motika avo lenta isika. Ny fanadiovanay ny helika mpanampy dia manome ny fifindran'ny herinaratra azo antoka ho an'ny applicaton ankapobeny toy ny fikarakarana rano, milina fanamboarana sakafo, fikosoham-bary, trano simenitra, conveyor mine
Famaritana moto fiakaran'ny helika:
Ny reducer gear hélik dia mpanentana fampihenana vaovao. Ny fampiharana ny fanamafisana, ny foto-drafitra famolavolana maoderina amin'ny rafitry ny rafitry ny modely dia manana ny toetran'ny habe kely, ny lanjany maivana, ny fanamafisam-peo lehibe, ny fanombohana azo antoka, ny fanasokajiana ny fifandanjana fitaterana sns ... ary azo ampifandraisina araka ny takian'ny mpampiasa sy ny fametrahana isan-karazany. toerana. Vita vita amin'ny vy avo lenta amin'ny haingam-pandeha ambony sy vita amin'ny fikarakarana ambony. Manana tanjaka mahazaka sy mateza mafy.
Ny helika reducer hélik dia namboarina mifanaraka amin'ny fepetra ara-teknika iraisam-pirenena ary manana votoaty ara-teknika avo.
2, mamonjy toerana, azo itokisana ary maharitra, miaraka amin'ny fahafaha-miasa mahery vaika, herinaratra hatramin'ny 132KW;
3, fanjifana angovo kely, fampisehoana lehibe kokoa, ny fahombiazan'ny reducer dia avo lenta amin'ny 95% na mihoatra
Ny fantsom-bava ambany, ny feo malefaka ary ny angovo azo;
5, ny fisafidianana kojakoja vy sandoka avo lenta, boaty vy natsipy vy, ny tampon'ny fitaovana aorian'ny fitsaboana hafanana avo lenta;
Aorian'ny fametahana masinina mba hiantohana ny fampitoviana ny làlana sy ny fangatahana mitondra ny toerana, ny fanavotana izay mamorona fivoriam-pamokarana mpanamory fiaramanidina dia misy karazana motera isan-karazany, izay natambatra ho mechatronika, izay manome antoka tanteraka ny toetran'ireo vokatra ireo. .
R serasera R reducer Rosiana teknika
modely Shaft Dia. Afovoany avo Output Flange Dia. Power Taham Toro lalana nomena Weight
Solid (mm) (MG) (MG) (KW) (NM) (Mp)
Fanamarihana: ny lanjan'ny tsy misy menaka sy motera, mavesatra sy flange mampiditra ny 10%.
Boaty Helical Gear afaka miovaova modular miaraka amin'ny reducers sy variator hafa, mahazo fihenam-bidy mihena sy fiovaova. Noho izany dia ampiharina any amin'ireo faritra indostrialy maro, toy ny vanja metallurgical, fitaterana fampitaovana, fananganana petrokimia, lamba soratra, tontolo iainana, jiro elektrika, milina plastika, fitaovam-piantsena sy ny sisa.
Sogears R andian-dahatsoratra mahery Helical helika reducer (fitaovam-pitotoana feno)
The series of helical reducer dia natao sy namboarina tamin'ny fototry ny rafitra mitambatra modular. Betsaka ny mitambatra moto, endrika fametrahana sy ny drafitra fananganana endrika. Ny tahan'ny fifindrana dia voasivana tsara mba hihaona amin'ny toe-piainana samy hafa, mahatsapa ny fampidirana elektrôzikaika, fahitana fahitana ambony ary ny fanjifana angovo kely. Tsara kokoa ny fampisehoana. Ny fitaovam-pandrefesana nify mafy dia vita amin'ny vy vita amin'ny kalitao avo lenta, ny mason-koditra amin'ny alàlan'ny fandrafiana sy ny famonoana, ny fikosoham-bary mifindra dia vita tsara, ny fifindrana dia mihena, ny lozabe ary lehibe ny fahaiza-mitondra. Miakatra ny hafanana ambany ary lava ny fiainana. Ampiasaina betsaka amin'ny indostria maro, toy ny metallurgy, ny fitsaboana ny fanodinana rano, ny simika, ny fanafody ary ny indostria hafa.
Mety tsara amin'ny fahefana avo
Famolavola lava velona
R37-R167 modely safidy azo ampiharina
RM series reducer natao manokana handrakotra fitaovana
Dimy: Toetran'ny vokatra:
Toriteny famoahana: Hatramin'ny 18000N.m
Ny hafainganana famoahana: 0.16-1028 RPM
Fametrahana fametrahana: fametrahana zoro ambany / fametrahana flange
Fahitana fandefasana: 2 (ratio: 5-24.8): 96%, 3 (ratio: 27.2-264): 94%
R: Karazan-tongotra miendrika RF: Miakatra amin'ny flange
R ... F: Fihenam-bongan-tongotra miakatra RM: Miakatra miaraka amin'ny tranobe miitatra ny flange
RX: Dingana tokana miakatra RXF: miakatra tsangambato tokana
Ireo modely maoderina amin'ny andian-dahatsoratra Rosiana mafy fanamafisana ny fanaintainana:
R / RF17, R / RF27, R / RF37, R / RF47, R / RF57, R / RF67, R / RF77, R / RF87, R / RF97, R / RF107, R / RF137, R / RF147, R / RF167, R / RFXNUMX, R / RXX RFXNUMX
Ireo modely maoderina amin'ny andiany R andian-tsolika mahery vaika misy ny reducer maoderina iray:
RX / RXF37, RX / RXF47, RX / RXF57, RX / RXF67, RX / RXF77, RX / RXF87, RX / RXF97, RX / RXF107, RX / RXF127, RX / RXF157, RX / RXFXNUMX, RX / RXFXNUMX
Tongasoa tompoko ianao hifandraisanao amiko raha mahaliana ny vokatra.
Ny ekipanay dia hanohana izay ilanao rehetra.
1 Q: Inona ny infomation holazaiko aminao hanamarina ny reducer gear.
A: Model / Size B: Herinaratra môtô C: Hafainganana famoahana D: Antoka fanompoana.
2 Q: Ahoana raha tsy haiko hoe reducer gear no ilaiko?
A: Aza matahotra, mandefasa fanazavana betsaka araka izay azonao atao, hanampy ny ekipa anao hahita ilay mety tadiavinao ianao.
3 Q: Hafiriana no mbola miandry ny valiny rehefa avy nandefa ny famotorana aho?
A: Tao anatin'ny ora 12.
4 Q: Vanim-potoana voafetra ho an'ny fanodinana fitaovam-piadiana ianao?
A: Izahay dia manome tolotra herintaona hatramin'ny nialan'ny sambo nandao an'i Shina.
5 Q: Inona ny indostria orinasa ampiasain'ny reducer anao?
A: Ny boaty eto aminay dia be mpampiasa amin'ny faritra simenitra, textile, fanodinana sakafo, zava-pisotro, indostrian'ny simika, escalator, kojakoja fitahirizana, metallurgy, tabako, fiarovana tontolo iainana, lozika ary sns.
6. F: Ahoana ny fandefasana:
A: Amin'ny ranomasina - Ny mpividy dia manendry mpampandroso, na ny ekipan'ny varotra ataontsika dia mahita mpandefa mety ho an'ny mpividy.
Amin'ny alàlan'ny rivotra - Ny tolotra mpividy dia manangona kaonty mazava, na ny ekipanay mivarotra mahita izay mety ho an'ny mpividy. (Ny ankamaroany ho an'ny santionany)
Ny hafa - Manamboatra entana any amin'ny toerana sasany any Shina tendren'ny mpividy izahay.
7. Rehefa mametraka baiko ianao dia hanamafy aminao ny ekipanay momba ny loko, fonosana, fomba fandoavana sy fandefasana, dia halefa aminao ny fifanarahana fivarotana hanamafisana.